Ahoana ny fomba hampijanonana ady amin'ny alika | Alika Manerantany
Iray amin'ireo toe-javatra sarotra indrindra azontsika atrehana amin'ny maha mpitantana alika antsika dia ady anisan-dry zareo. Ny fifanolanana amin'ity karazana ity dia mety hiteraka voka-dratsy lehibe toy ny ratra sy ratra hafa, satria segondra vitsy monja dia ampy hiteraka fahavoazana lehibe. Izany no antony maha zava-dehibe ny fahalalantsika ny fomba hampiatoana ny olana.
2 Mitonia hatrany
3 Atsipazo eo amboniny ny rano na lamba firakotra
5 Atsangano ny tongony aoriana
6 Aza misintona ilay rojo na manelanelana azy roa
Ny tsara indrindra dia sorohy ny alika roa tsy hanomboka ny ady. Noho io antony io dia tsy maintsy jerentsika tsara ny karazana fifandraisan'ny biby fiompintsika sy ny alika hafa, ary ahitsio ara-potoana raha tsikaritray fa misento, mihombo na mampiseho ny nifiny. Tokony hataontsika amin'ny antso fanairana izany, toy ny maina maina miaraka amin'ny tadiny.
Ny zavatra ratsy indrindra azontsika atao amin'ireo fotoana ireo dia ny kiakiaka sy ny fikorontanana. Mila mijanona ho tony isika, na dia eny aza, mihetsika haingana. Tsy mikapoka na iza na iza amin'ireo biby roa na misintona ny vatany na ny tadiny, satria hampitombo ny hafanam-pony izany.
Atsipazo eo amboniny ny rano na lamba firakotra
Raha azo atao, ny manipy rano iray siny amin'ny alika roa na mandena azy ireo amin'ny fantsom-pifandraisana dia hiteraka fisarahana avy hatrany ho fihenan'ny lohalika. Toy izany koa no mitranga raha manipy lamba firakotra na palitao amin'izy ireo isika, satria hifantoka amin'ny fanesorana ilay akanjo izy ireo ary hanome segondra vitsy antsika hiditra an-tsehatra sy hifehezana ny toe-draharaha.
Fetsy tsara iray hafa ny fanaovana feo mafy mba hisarihana ny sain'ny alika. Ny safidy tsara indrindra dia ny mamely zavatra metaly, fa ny feo mahery rehetra kosa dia mahavita ny saiko.
Atsangano ny tongony aoriana
Izany dia tsy maintsy atao hatrany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tompon'ny alika hafa. Samy tsy maintsy mandray ny tongotry ny alikany, amin'ny haavon'ny valahany, miaraka amin'izay, ary atsangano tsikelikely. Haharitra segondra vitsy na vitsy minitra ny biby vao afaka, fa hanao izany tsy misy simba raha mbola tsy mihemotra isika.
Aza misintona ilay rojo na manelanelana azy roa
Arakaraka ny iverenantsika amin'ny vozon'akanjony, ny fitomboan'ilay herisetra, izay mety handratra. Etsy ankilany, tsy tokony hametraka ny tanantsika na ny tanantsika eo anelanelan'ny roa isika, satria mety haratra mafy isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hampitsaharana ady amin'ny alika
Torohevitra amin'ny fisafidianana mpikarakara alika